Bale Oo Dhaawac Ka Soo Gaaray Kulankii Saaxibtinimo Ee Tottenham iyo Liverpool - jornalizem
Bale Oo Dhaawac Ka Soo Gaaray Kulankii Saaxibtinimo Ee Tottenham iyo Liverpool
Gareth Bale ayaa dhaawac cusub waxa uu ka soo gaaray kadib markii uu si adag u jalaafay ciyaaryahanka Liverpool ee Charlie Adam.
Dhaawacan soo gaaray Bale oo aan la cadeyn heerka uu gaarsiisan yahay ayaa waxa uu soo cusbooneysiiyey cadaawad soo jirtey muddo hal sano ah oo ka dhexeysay isaga iyo Adam.
Bale ayaa waxa uu dhaawacan soo gaaray daqiiqadii 18aad ee kulanka waxana xilligaasi ka muuqday Bale xanuun daran oo qasabtay in uu lugta si xoog ah ugu dhego.
Bale oo xilli ciyaareedkii hore ku dhamaystay dhaawaca ka soo gaaray Adam oo jilaafo adag u dhigey ayaa kulankii dhex maray Tottenham iyo Liverpool waxaa la siiyey dawooyin waxana uu ciyaaray intii ka harsanayd kulankaa qeybtiisii hore isagoo aan si wanaagsan u ciyaarin tan iyo markii dhaawacu uu soo gaaray waxaana la bedeley Bale qeybtii dambe waqtigii nasashada oo kuma soo noqon garoonka qeybtii labaad ee ciyaarta.
Ciyaarta saaxibtinimo oo labada naadi ay ku yeesheen magaalada Baltimore ee dalka Maraykanka ayaa ku soo dhamaatay barbaro aan wax goolal ah la iska dhalin. Hase yeeshee qaladka uu ku galay Adam ciyaaryahanka Spurs ee Bale oo aan wax ganaax ah la siin ayaa waxaa aad uga carooday ciyaaryahanadii fadhiday kursiga keydka ee kooxda Tottenham.
Tababare Andre Villas-Boas ayaa waxa ereyo is weydaarsadeen Adam markii uu garoonka ka sii baxayay xilligii nasashada, Adam ayaa isagana la bedeley xilligii nasashada.
Bale iyo Adam ayaa waxa ay ku leeyihiin taariiq ciyaaraha dalka Ingiriiska. Waxana uu Adam ka badbaaday ganaax culus oo FA ku ridi lahaa bishii May 2011, xilligaa oo uu u ciyaarayay naadiga Blackpool kadib markii uu si adag u jilaafay Bale kulan ka dhacay garoonka White Hart Lane.